October | 2017 | Radio Himilo | Page 4
Maxaa helay Kaskii Hooyo-nimo ee kartida lahaa?!
radio himilo October 21, 2017	MAQAALO Leave a comment 198 Views
Muqdisho – Dunida maanta aanu guudkeeda dul maashoonayno waxa ay tahay mid wajiyo badan, waxa wiiqmay wax walba oo lagu farmuuqi jiray in ay yihiin wax tayaysan, toosan, tiigsimaad leh oo lagu tashan karo. Balse tan maanta la arko ma ...
Jesus oo sheegay in City ay leedahay sifada ciyaareed ee xulka Brazil.
radio himilo October 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 41 Views
Muqdisho – Gabriel Jesus ayaa sheegay inuu arkayo isku dhignaan ka dhaxaysa hannaan ciyaareedka fiican ee Manchester City ku hoos ciyaarayso maamulka macalin Guardiola iyo xulka Qaranka Brazil. Jesus oo 20-jir ah ayaa 6 gool u dhaliyay kooxda 7dii kulan oo ...
Emre oo sharaf ku tilmaamay damaca Juventus ay ku doonayso.
radio himilo October 21, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 23 Views
Muqdisho – Emre Can ayaa sheegay inuu la dhacsan yahay xiisaha ay u heyso kooxda Juventus, wuxuuse tilmaamay inuu kusii harayo Liverpool tiiyoo uu ku dhacay inuu heshiis cusub u kordhiyo. Heshiiska 23-jirkan uu ku joogo Anfield ayaa ku eg ...
Saaka iyo Zoobe – Ka duwan Sidii hore!
radio himilo October 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 41 Views
Muqdisho – Meel dheer ayaan ka arkay socodka gaadiid kusii jeeda dhankaa iyo jidka Zoobe. Waxaan ogaaday in ugu danbeyn saakay dib loo furay. Qorshahaygu horraan wuxuu ahaa inaan docda kale kasoo galo xaruntayda shaqada. Qalbigayguna ima siinayn inaan kusoo ...
radio himilo October 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 26 Views
Muqdisho – Nin reer Michigan ah ayaa isku dayay inuu booliska ku cadaadiyo fulinta dalab uu doonayo si ay iyaguna ugu fududaato qabashadiisa isaga iyo kuwa lamidka ah haddii ay 1,000 jeer share dhahaan sawirkiisa. Baaqan aan caadiga ahayn wuxuu ku ...
radio himilo October 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 35 Views
Muqdisho – Nin ku nool dalka UK ayaa sheegay inuusan hadda kahor waligiis arkin afadiisa oo la yaab awgiis suniyaha la taagtaagaysa markii ay ogaadeen in nin soo-galooti ah uu kusoo dhex dhuuntay gaarigooda. Lammaanaha Wales ayaa dalxiis afar maalmood ...
Hooyo faqri awgiis carruurteeda u dilaysa.
radio himilo October 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Booliska ayaa bilaabay baaritaan kadib markii hooyo da’yar ay dishay labadeeda carruur waayo waxay ku daashay ku noolaanshaha nolosha saboolnimada, marka loo eego booliska Hindia. Booliska Mumbai ayaa sheegay inay haweeneyda ku oogeen fal-danbiyeed ah inay galabsatay geerida ...
Aabe gabadhiisa ku dilay nadaafad-xumi iyo dhega-adeyg.
radio himilo October 21, 2017	Features, Wararka Leave a comment 31 Views
Muqdisho – Aabe lix carruur ah heysta ayaa loo xiray dilka mid kamid ah gabdhihiisa oo uu ku dhaliilay inay areebo ahayd. Aabahan ku nool gobalka Ohio dalka Maraykanka ayaa qirtay inuu dilay gabadhiisa waayo waxay diiday fulinta amaradiisa iyo ...
Wales oo sheegtay in kulan saaxiibtinimo ay la yeelanayso France
radio himilo October 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 40 Views
Muqdisho – FA-ga Welish-ka ayaa xaqiijiyey in xulka Wales uu kulan saaxiibtinimo la ciyaari doono xulka qaranka France bisha soo socota. Ciyaarta waxaa lagu qaban doonaa Stade de France Paris maalinta Jimcaha, 10-ka bisha November. Ciyaarta saaxiibtinimo ayaa noqon doonta ...
Antonio Conte oo xaqiijiyay in Alvaro Morata uu garoonka kusoo laabtay
radio himilo October 17, 2017	Xulka cayaaraha Leave a comment 36 Views
Muqdisho – Tababaraha naadiga Chelsea, Antonio Conte ayaa xaqiijiyay in weeryahanka kooxda Alvaro Morata uu kusoo laabtay safka naadiga waxaana laga yaabaa in uu u safto Blues-ka kulanka Champions League ee Roma habeen danbe. Kadib markii uu si xoogan ku ...